Yini engekho entwasahlobo yakho yentwasahlobo? Impendulo enembile i-jeans emhlophe. Hamba uye eshalofini elingemuva kwekhabhinethi oyintandokazi yebhande eliluhlaza okwesibhakabhaka noma oluhlaza okwesibhakabhaka - laba abaklami bezinkathi banconywa kakhulu ukuba bavelele emakhaleni amhlophe noma efana namakhwenyana. Landela isibonelo sabablogi bezinhle futhi ube nemfashini!
I-jeans emhlophe - kufanele-ibe namadodakazikazi azintandokazi
I-Jeans + phezulu - inhlanganisela ye-classic engazange ilahlekelwe ukuthandwa kwayo kusukela ezikhathini ze- "Sex no-City". Nika izintandokazi kumamodeli wesifazane onamahlombe avulekile, ama-cutouts asymmetrical, ama-prints ezimbali, ubuciko kanye nezinwele - i-motif romantic isamanje. Abamemezeli bezinqumo ezinesibindi endaweni engcolile kumele baqaphele izitshalo ezivulwa yisisu. I-Nuance - khetha i-jeans enezinwele eziphakeme kubo: le ngubo izokungezela kuwe intsha encane.
Jeans Classic - abesifazane besimanje of fashion
IJeans + ijaji elimhlophe lokugqoka - iqoqo elihlonziwe njengesibonelo sesitayela emhlabeni wezemfashini. Hlanganisa i-mid-coat pastel shades ngezincane noma, ngokuphambene - i jeans ngamabomu, ngokudala isithombe esisha sentwasahlobo. I-Nuance - ungakhohlwa mayelana nesimo se-"metallic": hlaziya iqoqo ngokumangalisa okumangalisa ukunambitha - ukukhanyisa izinsimbi, ubucwebe noma isikhwama.
Izindwangu ezine-jeans ezimhlophe sezulu elipholile
IJeans + ihembe - ukukhetha okulungile kwendwangu yansuku zonke. Engeza i-laxic ye-laceic ye-cut's man to pair pair denim - lokhu kukhetha kuhle ikhodi yokugqoka engeyona eqinile. Inketho yendawo yonke yokuhlangana nabangani kuyoba yikhati elizwe elibucayi noma i-vest, kanye nosuku lokuthandana - imodeli enhle ngemininingwane ye-drapes neminye engavamile.
Indlela yokugqoka i jeans ezimhlophe ngehembe: izibonelo zesitayela somgwaqo
I-pre-gardens - isenzo esisha-2016
Abantu abamnyama: isamba samnyama esiphezulu sonyaka wekwindla nobusika 2015-2016
Ukushaqeka nokushaqeka: izithombe eziyinkimbinkimbi kakhulu kusukela ekwindla-ebusika kubonisa 2015-2016
Indlela yokubukeka ebiza ngebhajethi encane: imithetho engu-4 yesigqoko sokugqoka "isimo"
Amamodeli angama-10 wezingubo zangaphandle, okwenzeka kulokhu ekwindla nobusika
I-TOP-5 enemfashini: amajeketi ezitelekayo ebusika 2016-2017
I-Aesthetics yama-30 ekuqoqweni kobucwebe be-Moonka dEmiurge
Izitsha zangempela nezomnandi zoNyaka Omusha
Iyini i-manicure ehlangene?
Ividiyo ene-naked Evelina Bledans ngokuzumayo ijabule ngabasebenzisi be-intanethi
Okufanele ukwenze uma ubuhle ebuhlotsheni bubonakala
Kungani amadoda elala emkhatsini wabo futhi ashintshe
I-Horoscope ye-Libra Abesifazane ngoJanuwari 2017
Ungakuyeka kanjani ukuthula futhi uthole ukuzethemba?
I-Horoscope yezidumbu-Abesifazane ngo-March 2017
Phatha ukukhwehlela: ukupheka kwabantu
Ukukhulelwa ebusika, isikhathi sokuqala
Yidla ukuze ukwandise impilo yakho
Izimpawu kanye nokudla okunempilo nge-duodenal ulcer.